Wararkii: Feb 25, 2007
Xabiibo Xasan oo Geeryootay...
Ugaas Max’ed Weli oo sheegay in ciidamada Maxaakiim aysan Madaafiic ka dhex ridin shacabka..
Urur cusub oo la magac-baxay Xoogaga Difaaca Shacabka oo looga dhawaaqey..
Max’ed Dheere oo sheegay in uusan aqoonsaneyn Maamulkii...
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Kismaayo oo ay soo wajahdey Cabsi...
Guddiga Ilaalinta Deegaanka Gobalka Shabeelada hoose oo uga digey..
C/llaahi Yuusuf oo soo gaaray Magaalada Addis Ababa..
Amiin Yuusuf Khasaaro oo gabadhaan xaaladeeda la socday ayaa u xaqiijinaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in Xabiibo Xasan ay geeryootay, waxa uuna u soo jeedinayaa sidoo kale Web-Site horey warbixinteeda loo galshay inay la socdaan in ay Xabiibo Xasan Geeryootay. [ Qoraaladii laga qoray Xabiibo ]
Ugaas Maxamad Wali
Ugaas Max’ed Wali oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay mar uu la soo xiriiray saxaafadda Muqdisho waxa uu soo dhaweeyey dagaalada iyo qaraxyada ka socda Magaalada Muqdisho.
“Ciidamada Maxaakiimta wax lug ah kuma lahan, hoobiyayaasha laga dhex tuuro, xaafadaha dhexdooda, balse iyagu waxay beegsadaan ciidamada Itoobiya iyo kuwo la shaqeeya” ayuu yiri Ugaas Max’ed Wali oo sheegay in waqti aan sidaasi u fogeyn ay dib u soo laaban doonaan ciidamadii Maxaakiimta Islaamiga ah.
Ugaas Max’ed Wali waxaa kale oo uu sheegay in ay ku jiraan abaabul iyo is diyaarin ay ku doonayaan in ay dalka kaga saaraan ciidamada Itoobiya iyo kuwa dabadhilifka u ah waxaa kale oo uu sheegay in mas’uuliyiinta Maxaakiimta Islaamiga ah dhamaantooda ay bad qabaan. Ugaasku waxa uu sheegay in kooxaha muqaawamada ah ee dagaalada ka wada Mqdisho ay wixii haatan ka dambeeya dagaalkoodu noqon doono mid ka fool ka fool ah.
:::: Laba bilood oo Maanta u buuxsantey intii Ciidamada Itoobiya ay ku sugnaayeen Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.. Feb 25, 07: Kismaayo (56), Muqdisho (60), Beledweyne (63), Baydhabo (71), Galkacyo (92)
Maalintii shalay ahayd Magaalada Muqdisho looga dhawaaqay urur cusub oo la magacbaxay Xoogaga difaaca shacabka soomaaliyeed "Somali Popular Defence Army (SPDA)" waxaana ururkaasi la sheegay in uu ka hawgali doono dhamaan gobalada Dalka, isla markaana uu bilaabi doono weeraro ay kaga soo horjeedaan Ciidamada Itoobiya oo ay sheegeen in ay ku soo duuleen dalka.
Ururkaan ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn Guddoomiyihiisa, waxayna sheegeen in ay ku mideysan yihiin dhamaan qaybaha kala duwan ee Bulshada, kuwaas oo uu ururku sheegay in ay si aad ah uga soo horjeedaan ciidamada Xabashida iyo kuwa la shaqeeyaba.
Dhawaan ayey ahayd markii urur la magacbaxay Dhaq-dhaqaaqa Muqaawamada Shacabka Soomaaliyeed looga dhawaaqay Magaalada Muqdisho, kaasoo meel fagaare ah kala hadlay Bulshada Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in ay weeraro waaweyn ka gaysan doonaan Magaalada Muqdisho.
Waxaa Magaalada Muqdisho ka socda weeraro iyo qaraxyo waaweyn oo lala beegsanayo xarumaha ciidamada Itoobiya kaga sugan yihiin Magaalada Muqdisho, waxa uuna weerarkii ugu ba’naa ka dhacay xaruntii hore ee Wasaaraddii Gaashaandhiga, waxa uuna socday mudo daqiiqado waxa uuna gaystay qasaare naf iyo maalba leh.
Max’ed Dheere oo ahaa Guddoomiyihii Siyaasadda Gobalka Sh/dhexe ayaa waxa uu sheegay in uusan aqoonsaneyn maamulkii uu dhawaan ku dhawaaqay Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi ee gobalka Sh/dhexe. Max’ed Dheere waxa uu sheegay in ciidamo isaga daacad u ah ay haatan gacanta ku hayaan Magaalada Jowhar, kuwaas oo uu sheegay in ay sugayaan ammaanka gobalkaasi.
Max’ed Dheere ayaa tilmaamay in maamulkii uu magacaabay Cali Geeddi aysan ula imaan wax dukumenti ah oo caddeynaya magacaabista Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi, isla markaana ay iyaga gacanta ku sii haynayaan gobalka Sh/dhexe.
Maamulkii uu magacaabay Cali Max’ed Geedi ee gobalka Sh/dhexe ayaa markii ay tageen Magaalada Jowhar oo ay damceen in halkaasi ka sii wadaan hawlahooda ayaa waxaa dhacday in ciidamo daacad u ah Max’ed Dheere ay halkaasi ka soo saaraan kuna amreen inay dib ugu laabtaan Magaalada Muqdisho.Maamuladii ay Dowladdu u magacowday gobalada ayaa dhamaantood waxaa ka hor yimid Bulshada iyo Beelah halkaasi dega.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo, waxay sheegayaan in Magaalada Kismaayo lagu daadiyey waraaqo looga soo horjeedo ciidamada Itoobiya ee dhawan la wareegay ammaanka magaaladaasi kaddib markii beelaha halkaasi dega ay ku heshiisiin waayeen nidaamaka iyo dhinaca ciidamada.
Ciidamada Itoobiya ayaa waraaqahaasi markii la daayey kadib waxaa soo wajahay cabsi iyo walwal, waxayna maalin walba kulamo la yeeshaan Odoyaasha iyo Waxgaradka beelaha dega magaaladaasi, waxayna ka codsadeen in ay soo sheegaan ciddii ka dambeysya inay daadiso waraaqahaasi. Ciidamada Itoobiya oo si aad ah isu ilaaliya ayaa waxa ay maalin walba kormeer ku sameeyaan dhamaan dariiqyada iyo wadooyinka soo gala Magaalada Kismaayo, iyagoo raadinaya hub.
Waraaqaha waxaa ku qornaa “Haddii aysan Ciidamada Itoobiya si dhaqsi leh uga bixin Kismaayo in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo
Qoraal uu soo saaray Guddiga ilaalinta Gobalka Sh/hoose ee ENAHO ayaa waxay ku sheegeen in ay soo kordhayaan dad ka dhigtay mehrad in ay gubaan ama ay jaraan iyagoo aan u Aabbe yeeleyn noocyada kala duwan ee dhirta, taasoo haddii aan laga hortagin sababi karta nabaadguur xoog leh oo soo wajaha gobalka Sh/hoose, taas oo ay dadku u isticmaalaan dhuxul ahaan iyo xaabo ahaan. Guddoomiye ku xigeenka guddigaasi Dr. Jaylaani Busur Sheekh Mayow, waxa uu uga digayaa dhamaan dadka ku hawlan xaalufinta dhirta iyo deegaanka inay joojiyaan loona hogaansamo baaqii dhawaan ka soo baxay Madaxweyne C/llaahi
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed oo baaritaan caafimaad u tagay dalka Ingiriiska ayaa intii uusan ka soo ambabixin waxa uu kulan la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi, waxa uuna uga warbixiyey xaaladda dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha oo wax laga weydiiyey qaraxyada iyo dagaalada ka socda Magaalada Muqdisho, waxa uu sheegayin qaraxyadaasi ay wadaan kooxo doonaya in aysan dalku degin, kana haray Maxaakiimtii Islaamiga ahaa isagoo sheegayin waqti ay ahaataba laga adkaan doono. [Dhegeyso Hadalkii uu ka jeediyey London]
Madaxweynaha DFKMG waxa uu shalay soo gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxaa markii hore jirey warar sheegayey in uu booqan doono Builguim laakiin sida muuqata uu safarkaas ka baaqday hadda.